Usuku My Pet » Ukuphepha iLungu Ingabe Inhloso yethu,en
Online ukuphepha uhlale iyahola izingqondo zethu, ngakho sasifuna anikhumbuze konke esikwenzayo ukuze sigcine amalungu ethu ephephile futhi ngithi kini: Sizimisele bakunike elondeke kunazo zonke-inthanethi ukuphola isipiliyoni.
Invest in embonini-ehola anti-scammer ubuchwepheshe
amasu Scammer beba ezinamandla nakakhulu futhi nzima ukuzibona. Kodwa senza konke esingakwenza ukuze abagcine bekude.
Siye besebenzisa anti-scammer ubuchwepheshe Scamalytics for 2 iminyaka manje. Idatha Ithuluzi amasheya scammer ngaphesheya online ukuphola umkhakha futhi kusiza ithimba lethu lalabalungisi abaqeqeshwe ibala imikhonyovu futhi bawasuse DateMyPet.com bona bengakaqali nakuqala ezithinta amalungu ethu. Scamalytics futhi auto-kuthola imikhonyovu futhi kususa bot, kanye nokunikeza ithimba lethu nge 'ngaphansi hood' ulwazi lokuthi akubonakali ehlweni lomuntu.
Ehlome ngamathuluzi okuthola lolu lwazi, ithimba lethu kwamakhasimende ezibekwe kangcono ukuzibona izitayela scammer futhi ususe ngokushesha kubo.
ukuqeqeshwa okuqhubekayo inkonzo yamakhasimende ethu amaqembu
Singabantu omunye izinkampani kuphela imboni siqu in-house service kwamakhasimende ithimba lethu, nge abazinikele ilungu support amaqembu luhlolokulinganisa kanye nokunakekelwa kwamakhasimende. Ithimba lethu of 60 umsebenzi 24 amahora ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto, 365 emalanga lalishumi ngemnyaka ukuhlinzeka kwesikhathi zone ukunakekelwa kumalungu ethu emhlabeni wonke.
We ubambe avamile futhi okuqhubekayo wagxila nokuqeqeshwa, kuhloswe ngokuqhubekayo ukuthuthukisa amasevisi ethu kanye nokuqinisekisa ukuphepha kwamalungu ethu.
Izikhathi Fast sikolo kute ente luhlolokulinganisa
ethimbeni waqeqesha screen Lethu konke okuqukethwe okukhiqizwa umsebenzisi ukuqinisekisa amaphrofayli ezithunyelwe kwangempela. Lokhu kuhilela izithombe ehlaziya, amaphrofayli, kwedayari, amavidiyo kanye kokuqala imiyalezo eyimfihlo ukuqinisekisa ubulungu labafanelekako ebekelwe i-site ngabanye noma inethiwekhi.
Ukuze ugcine izikhathi Luhlolokulinganisa lwentiwa ngaphansi esiphezulu 10 iminithi target, ethimbeni lethu babe ukubonakala ocacile izikhathi ukwamukelwa ukuze bakwazi ukuqapha ukusebenza yabo ngokwemizalwane yabo shift. Izikhathi Luhlolokulinganisa kukhona okwamanje umxhwele 7.5 imizuzu!
abaqeqeshi Dating enikeza usizo nezeluleko
Kanye nokunikeza high quality ukunakekelwa kwamakhasimende kubo bonke abasebenzisi bethu, ithimba lethu futhi senze njengoba dating abaqeqeshi, ukusiza amalungu ababhekene nesici technical noma abangenakho okuhlangenwe nakho daters online ukuze uthole okuningi aphume ukuphola yabo nakho.
Leli thimba ukunakekelwa kwamakhasimende anikeze iseluleko sendlela ukudala iphrofayli ukuthi ikwazile imiphumela emihle, kanjani uphephile futhi yini okumele uyilindele uma nithandana inthanethi.
Joyina for Free >
Top 5 Izaba for Ukuba Late to a Usuku
Veza Love Your Ngaphandle Words